Isixhobo seZondlo seMushroom | I-China i-mushroom Supplements Supplements, abaXhasi
I-Cordyceps Powder yezomkhosi
Uhlobo: Ukukhupha amakhowa
Icandelo: iziqhamo zomzimba
Uhlobo lokutsala: Ukukhutshwa kwamanzi-i-ethol
IBakala: Ibakala lokutya
Inkangeleko: Umgubo omthubi omthubi
Into esebenzayo: Polysaccharides 30% -50%
Uvavanyo lwe-mothed: HPLC
Ukugcina: Gcina kwiindawo ezipholileyo nezomileyo, gcina kude ekukhanyeni okuqinileyo.
Ubomi beshelf: iminyaka emi-2 xa igcinwe kakuhle.
I-Shiitake ikhuphe umgubo wengxowa ye-Mushroom Supplements
I-Lentinus edode (shiitake) likhowa elidumileyo laseTshayina, emhlabeni, likhowa lokuqala elalilinywa ngumntu. I-Lentinus edode (shiitake) inezinto ezininzi ezinesondlo kwaye inencasa emnandi ukuze ibizwa ngokuba yi "king mushroom".
I-Shiitake inokunyusa ukungakhuseleki, ukuthintela ukubanda, ukuthintela i-rachitis, into enento yokwenza ne-lentysin inokuthintela i-cirrhosis yemithambo yegazi, ukunciphisa uxinzelelo lwegazi. Kwaye i-shiitake ikwajongwa njengokutya okufanelekileyo ukukhusela ityhefu kukutya okuneasidi.
I-Agaricus Blazei ikhupha i-powder Bag ye-Mushroom Supplements
I-Agaricus Blazei Extract ithandwa kakhulu phakathi kwabantu. inokuqinisa ukomelela komzimba, kuthintele ukuqaqamba kwengqondo. Umzimba weziqhamo zawo unencasa kwaye luhlobo lwekhowa elinokutyiwa elinomxholo ophezulu weprotheni kunye neswekile. Zonke iigram ezili-100 zekhowa eyomileyo iqulethe i-40-45% yeeprotein ezingcolileyo, i-38-45% iswekile, i-18.3% ye-amino acid, i-5-7% yomlotha omdaka, i-34% yamafutha angcolileyo. Ngaphandle koko, iqulethe iivithamini B1, B2. Umzimba weziqhamo unezinto ezahlukeneyo ezisebenzayo ezinokuhlisa uxinzelelo lwegazi, njl.
ICoriolusversicolor Khipha iiPowder zeMushroom Supplements
Ama-mushroom aseTurkey asetyenziswe kumayeza aseTshayina amawaka eminyaka, kodwa awakaqhelekanga njengeyeza kuluntu lwaseNtshona. Oku kungatshintsha kule minyaka imbalwa izayo, nangona kunjalo, iiNzululwazi ziye zafumanisa ukuba i-turkey tail mushroom lunyango olunamandla lomzimba, kwaye inokunceda amajoni omzimba abaguli abanomhlaza wamabele. Oku kunokuthetha ubomi obude kunye nobomi obungcono kwizigulana ezinomhlaza kuyo yonke inkcazo. Amakhowa aseTurkey anokusetyenziswa njengesixhobo sokuzikhusela kwizinja kwaye ancede umzimba wenja ukuba uqaphele amathumba omhlaza kwaye ulwe nawo ngokuthe ngqo.
I-Cordyceps Military Extract Ingxowa yePowder yeKhowuthi yeziXhobo
Ukukhutshwa kweCordyceps Sinensis kukondla imiphunga kunye nezintso kwaye kuyenza ibe namandla kunye namandla. Kumayeza emveli amaTshayina, ii-cordyceps Sinensis zithathwa njengezinceda imiphunga kunye neziteshi zezintso. Ihlala isetyenziswa ngumdala wase China njengohlobo lwe "super-ginseng" yokuhlaziya kunye namandla. Ingasetyenziswa kunyango ukuxhathisa arrhythmia, ukuphelisa ukudumba kunye nokondla izintso. Isetyenziselwa ukubetha kwangaphambi kwexesha okanye ukubetha kwangaphambi kwexesha kwangaphambi kwexesha, i-nephritis engapheliyo, kunye nokusilela okungapheliyo kwezintso.
I-Ganoderma lucidum Susa i-Powde Bag ye-Mushroom Supplements
Amakhowe kaReishi (Ganodorma lucidum) Eyaziwa njenge-mushroom enamandla. Isetyenzisiwe njengonyango lwesiTshayina lweMveli kwiinkulungwane kwaye yaziwa ngokukhuthaza ixesha elide. I-Reishi Mushroom Extract yenziwa nge-Red Reishi Mushroom ngokunceda ekwandiseni ukuxhathisa komzimba kuxinzelelo kunye nokukunceda woyise imiceli mngeni yezempilo ngokukhawuleza.
Iingonyama zeeMowhroom zoKhupha iiPowder zeNgxowa zeMushroom
Imane yengonyama yintsholongwane enkulu enamahlathi ashinyeneyo kunye namahlathi amadala.lt ithanda ukukhula kumacandelo esiqu anamagqabi abanzi okanye imingxunya yemithi. Ubudala obuncinci bumhlophe, kwaye xa buvuthiwe, bujika buba bumdaka ngombala butyheli. Ijongeka ngathi iyintloko yenkawu ngokwendlela emi ngayo, yiyo ke loo nto ifumana igama layo. Imane yengonyama inezakha-mzimba eziphezulu ezingama-26.3 zeeprotheyini kwiigram ezili-100 zeemveliso ezomisiweyo, eliphindwe kabini inani lekhowa eliqhelekileyo. Inezinto ezingama-17 zee-amino acid. Umzimba womntu ufuna ezisibhozo kubo. Igram nganye yemane yengonyama iqulethe kuphela iigram ezingama-4.2 zamafutha, eyi-protein ephezulu, ukutya okunamafutha asezantsi. lt sisityebi kwiivithamini ezahlukeneyo kunye neetyuwa ezingaphiliyo. Yimveliso yezempilo elungileyo ngokwenene yomzimba womntu.
I-Maitake mushroom Khipha iiPowder zeKhowa yeziXhobo zeMushroom
Ifom: Inxalenye yePowder: iziqhamo zomzimba
I-Chaga ikhupha i-Powder Bag ye-Mushroom Supplements